Jowhar.com - Somali news Leader - News: Isku shaandheyn lagu sameynayo Golaha Wasiirada iyo wajiyayaal cusub ku soo biiraya (Warbixin)
December 13 2013 12:09:50
Isku shaandheyn lagu sameynayo Golaha Wasiirada iyo wajiyayaal cusub ku soo biiraya (Warbixin)
Shabakada Jowhar.com ayaa heshay warar muhiim ah oo ku saabsan qaabka ay u dhici doonto Isku shaandheynta oo Wasiiro dhowr ah ay saameyn doonto.
Wararka ayaa sheegaya in wasaarado qaar oo haatan isku jira la kala qaadi doono, isla markaana ay noqon doonaan kuwo iskood u taagan, waxaana arrintan ka heshiiyay Madaxda ugu sareysa dalka oo kulamo kala duwan ka lahaa labadii bilood ee la soo dhaafay.
Tirada laga dhigayo Golaha Wasiirada ayaa ah kuwo la isku dhex wado oo hadba tiro ay iska soo daba dhacayaan, waxaana hadal heynta ay ugu badan ee xafiisyada dowladda ay tahay in tirada Wasiirada ay noqon doonaan 25-wasiir, balse wasiiru dowlayaasha iyo wasiir kuxigeenada la soo koobi doono, bedelkii ay haatan ka badan yihiin 20-xubnood.
Sidoo kale warar kale ayaa iyana sheegaya in tirada Wasiirada dib loogu celin doono xukuumadihii hore, si loo jaangeeyo habka awood qeybsiga beelahana si isku mid u noqdo, waxaana aragtidaas ay sheegeysa in 18-wasiir laga dhigi doono, laakiin wali ma kala cada.
Wajiyeyaal cusub ayaa la sheegayaa inay ku soo biiri doonaan Golaha wasiirada cusub ee isku shaandheyntooda la sheegayo inuu dhici doono dhamaadka fasaxa Xildhibaanada ay galayaan labada bilood, gaar ahaan dabayaaqadka bisha Ramadaan oo noqon doonto xilliyada ugu dambeeya ee la shaacin doono.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale awood ku lahaanaya Golaha wasiirada cusub, iyadoo ay dib uga soo muuqanayaan xubnaha ay aadka isugu dhow yihiin ee haatan haya xilalka wasiirada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Faarax C/qaadir oo aad ugu dhow Madaxweynaha uu noqonayo Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga, waxaana Iskaashiga Caalamiga laga soo jarayaa Wasaarada Arrimaha dibada oo hada la mataaneysan.
Madaxda ugu sareysa ayaa kulamo gaar gaar ah la lahaa xildhibaanada baarlamaanka oo beel beel kula shirayay, waxaana ajandahooda uu ahaa sidii ay kalsooni ugu heli lahaayeen marka ay timaado kalsooni siinta Golaha wasiirada cusub.
Shirar gaar gaar ah ayaa ka socday hotelada Muqdisho, kaasoo ku saabsanaa sidii beel walba ay sadkeeda ugu heli laheyd isku shaandheyntan oo noqoneysa tii u horeysay ee dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh oo labo bil kadib sanad u buuxsami doonto.
Shirkii ugu dambeeyay ayaa shalay waxaa Muqdisho ku dhex maray Beesha Mudullood oo ay isugu yimaadeen, Xildhibaanada, siyaasiyiinta, odayaasha iyo waxgaradka, waxaana kulankan uu ahaa mid beesha midnimo ku muujineysay.
Xubno isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahano iyo shaqsiyaad kale oo qurbaha ka yimid ayaa hadba galaan gal ugu jira inay ka soo muuqdaan Golaha wasiirada cusub oo noqonaya kuwo u badnaanaya wajiyo cusub.
master on July 05 2013
0 Comments · 18550 Reads
jowhar.com3,192,578 unique visits